Tantara - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Izahay mpiara-miasa ny mpanjifa amin'ny voalohany, rehefa mifandray amin'ny fanompoana-varotra. Amin'ny maha-mpanolo-tsaina ara-teknika, dia iaraho midinika ireo fepetra takiana amin 'ny mpanjifa sy hanana vahaolana izay hampitombo ny fahombiazany sy ny nanampy-danja. Along manontolo - ISO 9001 dingana voamarina rojo - isika hanatitra ny vahaolana tsara tarehy indrindra fonosana.
Foana izahay eny an-dalana.
Mes manan-tsaina ny rafitra fitantanana ny atrikasa
Ny manan-tsaina amin'ny fahitana rafitra tsy miankina roa sosona-loha tamin'ny laser rafitra kevitra ny volamena tamin'ny laser natomboka tamin'ny fomba ofisialy, ary soa aman-tsara ampiharina eo amin'ny sehatry ny fanapahana ny kiraro hoditra.
Golden tamin'ny laser nanolo-kevitra ny stratejika drafitry ny "Volamena Mode: Sehatra + ara-tontolo iainana Circle" mba hanafainganana ny fanorenana ny avo-milina farany tamin'ny laser ary 3D teknolojia nomerika fampiharana fanavaozana sehatra - "volamena +".
Laser Golden dia nanorina fomba ofisialy Center Sales sy Service, any Etazonia sy Vietnam.
Laser Golden niara-niasa tamin'ny Textile Wuhan University mba hanorina denim tamin'ny laser fampiharana laboratoara.
Ny rafitra fandaminana orinasa, tsy nisy nanitsy indrindra. Maro ny sampany sy fisaraham-bazana no naorina.
Ny lalitra scanning fahitana tamin'ny laser rafitra fanapahana nitombo ny loko-sublimation sportswear orinasa no soa aman-tsara natomboka.
Tamin'ny May 2011, Golden Laser dia voaisa tamin'ny Fitomboana Enterprise Market ny Shenzhen Stock Exchange ( tahiry code: 300220 )
Ofisialy anjara eo amin'ny sehatry ny fanapahana tamin'ny laser fibre ho an'ny metaly, ny orinasa fanampiny Wuhan Vtop Fibre Laser Engineering Co., Ltd dia naorina.
CO2 RF vy lasers novokarin'ny Golden Laser no natomboka.
Automatic Galvo sokitra tamin'ny laser rafitra ho an'ny horonan-taratasy ara-nofo natomboka.
Laser volamena voalohany 3.2 metatra ny sakany Super-fanapahana milina tamin'ny laser CO2 dia afa-miala. Ny customization fahaizana ny volamena tamin'ny laser ho an'ny lehibe endrika flatbed CO2 tamin'ny laser fanapahana Machine dia fanta-daza ao amin'ny orinasa.
Niditra ny indostria indostrian'ny lamba. Ny voalohany mba handray anjara ao amin'ny orinasa filtration fampirantiana, nahavita fiderana niarahana niombon-kevitra.
Bridge peta-kofehy tamin'ny laser milina natomboka, ny tonga lafatra fanatontosana miaraka ny solosaina sy ny peta-kofehy tamin'ny laser fanapahana.
3D mavitrika mifantoka lehibe-format galvanometer sokitra tamin'ny laser rafitra nivoaka.
Ny an-toerana patanty modely amin'ny fiainana lava indrindra, ny ambony indrindra vidiny-fampisehoana sy ny ambany indrindra ny tahan'ny tsy fahombiazana, "fiaviana roa-fototra" andiany JGSH CO2 tamin'ny laser cutter, dia natomboka voalohany.
Large-format CO2 tamin'ny laser fanapahana milina amin'ny conveyor miasa latabatra tao anatiny famokarana, manamarika ny mety mandeha ho azy famokarana tamin'ny laser cutter.
Ny andian-dahatsoratra tamin'ny laser galvanometer pamokarana dia niorina ara-dalàna.
Lasa soa aman-tsara ny volamena tamin'ny laser marika fahefana tamin'ny laser rafitra.
Ny voalohany dia tamin'ny laser akanjo fanapahana milina any Shina dia nivoatra ny volamena soa aman-tsara tamin'ny laser, ary ny ao an-toerana sy avy any ivelany ny tsena nahazo fiderana avo.